Jose Mourinho oo qiray in qaab ciyaareedka Arsenal uu caawin doono Henrikh Mkhitaryan – Gool FM
(Manchester) 25 Jan 2018 Tababaraha Manchester United ee Jose Mourinho ayaa qiray in Henrikh Mkhitaryan uu si ka fiican United ula qabsan doono Arsenal.
Jose ayaa sheegay inay jiraan waxyaabo dhawr ah oo ka caawinaya laacibka reer Armenia inuu qaab ciyaareed cajiib ah ku soo bandhigo kooxdiisa cusub.
Wuxuu qiray in qaab ciyaareedka Arsenal oo ah mid ku haboon isaga ay tahay sabab laga fili karo inuu la qabsado kooxda tababare Wenger.
“Waxaan rumaysanahay in Mkhi uu ka fiicnaan doono sidii uu nagu ahaa anaga, sababtoo ah waa uu la qabsaday ingiriiska oo wuxuu joogay sanad iyo bar iyo sidoo kale qaab ciyaareedka Arsenal, sidaas darteed waan ku faraxsanahay isaga” ayuu yiri Mourinho.
“Suurogal ma ahayd inuu qaab ciyaareed fiican anagu nagu soo bandhigo? laga yaabee, suurogal ma ahayd inaan inbadan ka faa’idaysano xirfadiisa? laga yaabee, laakiin kama shalaaynayo wax walba isaga oo ku jira taariikhdeena”.
Karim Benzema oo guri ka raadinaya London (Kooxdee ayuu ku biirayaa?)